Brigadier General Tekle Kiflai oo Damiintay Siidaynta Jwxo-shiil – Rasaasa News
War goor dhaw naga soo gaadhay Caasmara, ayaa waxaa uu xaqiijinayaa in Mohamed Omar Osman [Jwxo-shiil] laga soo daayey xabsi ciidan oo lagu hayey mudo saddex maalmood ah. Jwxo-shiil ayaa galinkii dambe ee maalintii Axadii aynu soo dhaafnay laga qabtay xafiis uu ku lee yahay magaalada Caasmara ee dalka Eritrea, halkaas oo ay kala baxeen xafiiska ciidamada ilaalada madaxtooyada ee Eritariya.
Ilaa iyo hada ma cada sababta ka dambaysay qabashada Jwxo-shiil, balse wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in loo haysto lacago badan oo ku maqan Jwxo-shiil, kuwaas oo loogu talo galay in uu ku abuuro ciidan awood leh oo waxyeelo gaadhsiin kara xukuumada Itobiya. Xisaabaha lacagaha ku maqan Jwxo-shiil oo aad u badan, ayaa waxa uu sheegay in ay ka dhaceen ciidamada Itobiya ka dib galitaankii dalka Somaliya, markii ay gacanta ku dhigeen saraakiil sare oo ONLF ah. Xukuumada Eritrea ayaan ku qancin sida uu u sheegay lacagaha ku maqan iyo waliba oo aad uga biya diidsan wiiqanka xooga leh ee ku yimid Jabhada ay ku cadaadiso xukuumada Itobiya.
Arimaha kale ee iyana la sheegayo in ay keeneen xadhiga, ayaa waxaa loo aanaynayaa, wiiqanka ku yimid xooga ciidamada Jabhada ONLF ee ka garabka Jwxo-shiil, ee dagaalka kula jira Itobiya oo ay sabab u tahay, kalsooni daro ay u hayaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya kooxda Jwxo-shiil. Waxaana baryihii ugu dambaysay aad u soo kordhayey, qabyaalad iyo kala qaybsanaan xoog leh oo soo food saartay halgankii ay wada Jabhada ONLF, kaas oo ay sabab u yihiin xukuumada Eritrea iyo Jwxo-shiil.
Arinta saddexaad ee loo aanaynayo xadhiga Jwxo-shiil, ayaa ah shaki, in Jwxo-shiil intii uu joogay dalka Ingriiska, ay la kulmeen ciidamada MI5 ee dalka Ingriiska ayna waydiiyeen su,aalo la xidhiidha xidhiidhka xidhiidhka u dhaxeeya isaga iyo ururka Al shabaab, oo isagu waa Al shabaabe xidhiidh la leh ururka Alqaciida iyo lugta ay dawlada Eritrea ku lee dahay dagaalada ka socda Somaliya ee uu wado ururka Al shabaab.
Hadaba, sida ay wararku sheegayaan, waxaa Jwxo-shiil u yeedhay xukuumada Eritrea, oo iyada laftigeedu Jwxo-shiil u isticmaasha basaasnimo dhinaca dalalka reer galbeedka, Jwxo-shiil wuxuu ka qariyey dawlada Eritrea in ay waraysteen ciidanka sirdoonka ee dalka Ingriisku. Arintaas oo ay ogaatay xukuumada Eritrea in Jwxo-shiil uu la kulmay ciidanka sirdoonka ee Ingriiska, balse uusan sheegin Jwxo-shiil, arinta waraysiga ee sirdoonka Ingriiska ayuu moodayey in ayna la soconin xukuumada Eritrea.
Si kastaba, arintu ha ahaatee waxaa siidaynta Jwxo-shiil si xoog leh uga qayb qaatay Janaraalka xukuumada Eritrea u qaabilsan taageerada iyo hawlgalinta Jabhadaha ku kacsan dalalka Eritrea la dariska ah, sida Itobiya, Somaliya, Sudan iyo dalka Sieraleon. Brigadier General Tekle Kiflai [Manjos] oo ah wakiilka Jabhadaha, oo ah nin ay aad isugu dhaw yihiin M/w dalka Eritrea Isaias Afwerki, ayaa codsaday in Jwxo-shiil la siidayo oo uu isagu damiin ka noqdo, in uusan dalka Eritrea ka bixin inta laga dhamaynay amuuraha ay xukuumada Eritrea u haysato Jwxo-shiil. Sidaas ayaana maanta oo Arbaca ah xoriyadiisii loogu soo celiyey Jwxo-shiil, ka dib kolkii uu mudo saddex maalmood ah ku xidhnaa xabsi ku yaal xero milatari.
Mustaqbalka Jwxo-shiil, ayaan la ogayn halka uu ku dambayndoono, iyada oo ay waliba jiraan rag kooxdiisa ah oo ay aad isu hayaan Jwxo-shiil, oo uu ugu horeeyo ninka lagu naanayso Abtidoon oo aan baryahan lagu arag fagaarayaalka, si xoog lehna ay isu hayaan maamulka kooxda Jwxo-shiil.
Xukuumada Eritrea ayaa dhawaan waxay qaban doontaa shir ay u qabandoonto Jabhadaha ay hooyga siiso oo dhan, oo ay ka mid tahay kooxda Jwxo-shiil, waxaana suurto gal ah in xukuumada Eritrea ay halkaas ugu magacowdo kooxda Jwxo-shiil masuul cusub, inta ka horeysa qabashada shirkaas Jwxo-shiil kama bixi karo magaalada Caasmara ee dalka Eritrea, waana la xadiday dhaqdhaqaaqiisa.
Xurgufta dhextaal kooxda Jwxo-shiil, xabsi dawlaha lagu soo rogay Jwxo-shiil iyo xaalada ay ka damacsan tahay xukuumada Eritrea kooxda Jwxo-shiil, waxaanu ku xaad xaadindoonaa xogaha dheeraadka ah ee aan helo.